Nhau - Dongguan Yingjia Electronic Technology Co, Ltd
Iwe unonyatso kuziva mashandisiro emota dashcam? Iwe unonyatso kuziva kusarudza uye sarudza?
Kunyangwe mutyairi wekare, mutyairi mutsva, murume mutyairi, kana mukadzi mutyairi, vanotya tsaona nekurovera. Kune chete rekodhi yekuchaira. Nhasi Yingjia Electronic Technology inokudzidzisa iwe kuti ungatenga sei rekodhi yekutyaira.
1. Imba yemitambo yemhando: Hunhu hwayo ndeyekuti kupenya kwakatenderedza 2000 lumens (pamwe nekuvandudzwa kweprojekti, iyi nhamba iri kuwedzera, uye musiyano uri pamusoro), uye chiyero chechikamu cheiyo projekti skrini iri kunyanya 16: 9. Akasiyana mavhidhiyo madoko akazara, akakodzera kutamba mafi......
Kune akawanda mabasa echairo chekutyaira data rekodhi: Chekutanga pane zvese, tsaona inogona kupora.Sechipiri, kuneta kutyaira kunogona kudzivirirwa. Rekodhi rekutyaira rinogona kurekodha mutyairi wekutyaira nguva. Mamwe marekodhi ane chiyeuchidzo basa. Kana iwe wakaneta, iwe unogona kuyeuchidza mur......
Shanduko dzekare dzekufamba kwemotokari
Nemukurumbira wemota dzakazvimiririra uye kuwedzera kwenzira dzekufamba dzakadai sekushanya-kwekutyaira, vafambisi vemotokari vava kunyanya kufarirwa nevaridzi vemota, uye vatove "chombo" chakakosha chekuti vamwe vanhu vafambe. Varidzi vemotokari vazhinji vanonzwa kuti hakuna ngozi kufamba nayo, kun......